खलिल जिब्रानको लघुकथा: पागल  OnlineKhabar
खलिल जिब्रानको लघुकथा: पागल
तपाईं मलाई सोध्नुहुन्छ, पागल कसरी भइस् ? खासमा भएको यस्तो हो:
धेरै समय अगाडिको कुरा हो, जब भगवान् पनि पैदा भएका थिएनन् । एक बिहान म गहिरो निद्राबाट ब्युँझिएँ । मैले मेरा सारा मुखुण्डोहरु चोरी भएको थाहा पाएँ । ती सात वटा मुखुण्डो थिए, जुन मैले सात जन्मदेखि अनुहारमा पहिरिँदै आएको थिएँ । मुखुण्डो नलगाई म ठूलो आवाजले चिच्याउँदै भिडमभिड गल्लीमा दगुर्न थालेँ- ‘चोर ! चोर !!’
मान्छेहरु म माथि हाँस्न लागे । कतिपय त मदेखि डराएर आफ्नो घरभित्र पसे ।
जब म बजारमा पुगेँ, आफ्नो घरको छतमा उभिएर एउटा युवक करायो- ‘हेर सबै जना, पागल आयो !’
उसको मुख हेर्न मैले मास्तिर हेरेँ । त्यो दिन सूर्यको किरणले मुखुण्डोबिनाको मेरो नाङ्गो अनुहारलाई पहिलो पटक चुम्यो । सूर्यप्रति मेरो आत्माभरि प्रेम उर्लियो । मुखुण्डोको कुरा मेरो दिमागबाट विस्तारै हराउन थाल्यो र म विक्षिप्त भए जस्तै कराएँ – ‘सुखी होऊ, सुखी होऊ मेरो मुखुण्डो चोर्नेहरु हो !’
यसरी म पागल भएँ ।
आफ्नो यही पागलपनमै मैले स्वतन्त्रता र सुरक्षा पाएको छु । एक्लै बस्न पाउनुको स्वतन्त्रता र आफ्नो परिचय बनाउने अनुभूतिबाट मुक्ति । जो हामीलाई चिन्दछन्, खासमा उनीहरु हामीभित्र केही न केही गुलामी रोपिदिन्छन् ।
तर, मुक्तिको यो अनुभूतिमा मैले घमण्ड गर्नु हुँदैन । किनकि जेलमा बस्ने एउटा चोर पनि जेल बाहिर रहेको दोस्रो चोरबाट सुरक्षित रहन्छ ।
अनुवाद: जोतारे धाइबा
२०७४ वैशाख २७ गते १५:५९ मा प्रकाशित
anjana लेख्नुहुन्छ | २०७४ वैशाख २७ गते १६:३३